Wednesday, December 12th, 2018 - 11:14:23
Ashley Cole oo laga doonayo horyaalka Ingiriiska
0 Sunday December 06, 2015 - 15:19:37
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa dooneysa inay heshiis la gaarto daafacii hore ee kooxaha Arsenal iyo Chelsea Ashley Cole oo ka tirsan iminka kooxda Roma.
Gary Neville oo doonaya in uu Vardy geeyo Valencia
0 Sunday December 06, 2015 - 11:26:08
Tababaraha Cusub ee Valencia ayaa ka codsaday madaxweyne Peter Lim in uu January u ogolaado soo qaadashada Vardy oo weerarka ka ciyaara.
Van Gaal: Suarez ama Aguero kaliya ayaa noo dhalin kara goolal
0 Sunday December 06, 2015 - 09:34:46
Manchester United macallinkeeda Louis van Gaal ayaa rumeysan in kooxdiisu goolal dhalin doonto haddii ay hesho weeraryahano sida Sergio Aguero ama Luis Suarez ah.
Kulamada la ciyaari doono ee Horyaallada 5-ta ah ee Adduunka ugu sarreeya iyo Saacadaha la ciyaarayo
0 Sunday December 06, 2015 - 08:54:19
Kulamo ka tirsan Horyaallada kala duwan ee Yurub ayaa la ciyaari doonaa, waxaanna halkan idinkugu soo gudbin doonnaa sida ay kooxuhu u wada ciyaari doonaan iyo Saacadaha kulammada.
Chelsea oo ku dhawaaqday la saxiixashada Antoine Griezmann January
0 Sunday December 06, 2015 - 07:34:11
Chelsea ayaa waxaa ay sheegtay in aysan sina uga gaabin doonin Saxiixa Atletico Madrid weerarkeeda Antoine Griezmann bisha January daaqadda kala gadashada ciyaartoyda.
Valencia oo joojisay Guulihii Barcelona, sidee loo xakameeyay Suarez, Messi iyo Neymar "Sawirro"
0 Sunday December 06, 2015 - 07:30:50
Luis Suarez ayaa ku garaacay goolhaye Jaume Domenech darbo xooggan oo la dhigay dhinaca birta hoose, Barcelona ayaana hoggaanka ku qabatay gool ay hor dhalisay kulankii Mestalla.
Real Madrid oo ku barbaratay Getafe si kumeel gaar ahna safka hore ugu dhaqaaqday
0 Saturday December 05, 2015 - 20:25:41
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa gegada Bernabue ku marti soortay kooxda kubadda cagta Getafe kulan ka tirsanaa horyaalka Spain ee La Liga.
Dhammaan Kulamada ka dhici doona 5-ta Horyaal ee Adduunka u sareysa & Saacadaha la daawan doono
0 Saturday December 05, 2015 - 11:13:19
Kulamo waaweyn ayaa ka jiri doona dhammaan Horyaallada kala duwan ee Qaaradda Yurub, waxaan halkan idinku soo gudbin doonnaa Kulamada dhacaya iyo Saacaddaha ay dhici doonaan Galabta iyo Caawaba.
Falanqeynta kulanka, Valencia vs. Barcelona Wax walba oo kulankan aadan ka ogeyn
0 Saturday December 05, 2015 - 10:30:09
Tababaraha Valencia ee cusub Gary Neville ayaa maanta daawan doona kulanka ay kooxdiisu la qaadaneyso Barcelona oo ka dhici doona Mestalla ciyaar ka tirsan La Liga.
Barcelona ma heysataa Saddexda weeraryahan ee taariikhda kubadda cagta ugu wanaagsan???
0 Friday December 04, 2015 - 19:33:28
(Kubadbile) Lionel Messi, Neymar Jr. iyo Luis Suarez waa kuwo kamid ah Saddexleyda weerar ee wada shaqeeyay kuwoodii ugu wacnaa waayaha kubadda cagta, waxayna isku fahmaan gudaha iyo dibadda garoonka si ay usoo jiitaan indhaha caalamka.
Xaqiiq: Xiriirka kubadda cagta Spain oo Real Madrid ka ciribtiray Cope del Rey
0 Friday December 04, 2015 - 19:17:43
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa toddobaadkan 3-1 uga badisay kooxda Cadiz oo ay ku wada kulmeen tartanka boqortooyada ee Cope Del Rey hayeeshee waxay dheelsiiyeen cayaaryahan ganaaxnaa.
Xavi Hernandez oo ka hadlay laacibka uu u arko inuu u qalmo hanashada Ballon d'Or
0 Friday December 04, 2015 - 15:07:46
(Kubadbile) Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar Jr. ayaa isugu soo haray hardanka loogu jiro hanashada abaal marinta laacibka dunida ugu fiican oo la bixin doono 16ka bisha inagu soo fool leh ee Janaury.
Gerrard Pique oo ka cabsi qaba kooxda Valencia iyo macallinkeeda cusub
0 Friday December 04, 2015 - 10:19:37
(Kubadbile) Daafaca kooxda Barcelona Gerrard Pique ayaa cabsi ka qaba kulanka ay booqanayaan kooxda Valencia oo Arbacadii tababare cusub u magacawday Gary Neville.
Alex Ferguson: Anigaa kula taliyey Gary Neville kooxda Valencia
0 Thursday December 03, 2015 - 14:19:30
Macallinkii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in Gary Neville uu kula taliyey shaqada kooxda Valencia.
Manchester United oo dooneysa Lionel Messi iyo Neymar, £350m ayey soo bandhigtay!!
0 Visits: 320 | Thursday December 03, 2015 - 14:17:57
Manchester United ayaa lasoo ifbaxday qorshe kale oo ay ku wada qaadaneyso Laacibiinta kala ah Messi iyo Neymar.
Real Madrid oo filaneysa in gebi ahaanba laga reebo koobka Del Rey, Sabab???
0 Thursday December 03, 2015 - 08:22:46
(Kubadbile) Inkastoo Real Madrid ay 3-1 ku taageysay kooxda tabarta yar Cadiz kulan ka tirsanaa Cope Del Rey, hadana waxaa laga yaabaa in guushaa ay soo af jarto hankeeda xagaagan ee koobaa maadaama eedeymo ka dhan ah ay soo baxeen.
Real Madrid oo war naxdin leh uu usoo yeeray
0 Thursday December 03, 2015 - 07:59:31
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa si weyn loola xiriirinayay inay hesho saxiixa wiilka danbeedka bidxeed ee daafac uga dheela Liverpool Alberto Moreno.
Natiijooyinka Kulamadii xalay laga ciyaaray Koobabka Waddamada Yurub
0 Thursday December 03, 2015 - 07:21:14
Naatiijooyin u wanaagsan kooxaha qaar kuwana ka ilmeysiiyay ayaa waxaa ay xalay ka dhaceen qaaradda Yurub, waxaana tartamada dhacay ka mid ahaa Ligue 1 Faransiiska, Copa Italia, Del Rey iyo Capital One Cup-ka England.
Muuqaal+Sawirro: Aubameyang oo ku socda Xawaare layaab leh
0 Wednesday December 02, 2015 - 20:32:45
Heerka gool dhalinta laacibka reer Gaaboon Pierre Emerick Aubameyang weeraryahanka kooxda Boussia Dortmund ayaa u kordhay si layaab leh , kadib markii uu dhaliyay 17 gool 14 kulan oo horyaalka dalka Jarmalka ah.
Gary Neville oo loo magacaabay macallinka Valencia "Sawirro"
0 Wednesday December 02, 2015 - 16:31:53
Gary Neville ayaa loo magacaabay macallinka guud ee kooxda Valencia tan iyo dhammaadka Xagaagan, wuxuuna rajeynayaa in uu is beddel weyn ka keeno Kooxdaas oo kuwa Isbeyn aadka loo qaddariyo ka mid ah.
« Prev1 ... 139140141142143144145 ... 165Next »